Dawlada Kenya Oo Qiratay Inay Ciidamadeedu Galeen Somalia, Al-shabaab Oo Sheegtay Inaanay Daaraha Dhaaadheer Ee Nairobi Jirayn Haddii Aanay Ka Bixin Iyo Diyaarad Ku Burburtay Xadka | Araweelo News Network (Archive) -
Dawlada Kenya Oo Qiratay Inay Ciidamadeedu Galeen Somalia, Al-shabaab Oo Sheegtay Inaanay Daaraha Dhaaadheer Ee Nairobi Jirayn Haddii Aanay Ka Bixin Iyo Diyaarad Ku Burburtay Xadka
Muqdisho(ANN)Wasiirka Arrimaha Debadda ee Kenya, Moses Watangula, ayaa xaqiijiyay in ciidammada dalka Kenya ay galeen gudaha dhulka Soomaaliya, wuxuuna ku macneeyay talaabadaa mid ay ku difaacayaan dalkooda oo ay kula dagaallamayaan sida uu sheegay Al -Shabaab. Gelitaanka
gudaha Somalia ee
ciidamada Kenya ayay dad goob joog ahi sheegeen inay kolanyo baabuur hubeysan oo Kenyan ah iyo diyaarado Helikobtarro wataa ay galeen Soomaaliya maalintii Axadda ee shalay.
Dawladda Kenya ayaa tallaabada xadgudubka ah ku sheegtay mid waafaqsan qaanuunka caalamiga ah. Kadib markii sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha debeda Kenya Watangula ay jawaab ka bixiyeen codsi uga yimi dawladda taagta daran ee Somalia. sidaana ku galeen gudaha Somalia iyo ka jawaabaya dalabkaa, isla markaana waxay Kenya ku andacoonay inay tallaabada ay qaadeen ay sabab u tahay xarakada Al -Shabaab ee ka dagaalama Somalia oo ay Kenya ku eedaynay ka sameeyeen gudaha dalkeeda kooxdaasi dhowr Af -duub oo ka dhacay gudaha xadka Kenya.
Dhaqdhaqaaqa dhinaca ciidamada ee ka jira xuduuda ay wadaagaan Kenya iyo Somalia oo ay kasoo talaabeen ciidamada Kenya xadkooda ayaa sababay in Diyaarad Milatari oo laga leeyahay dalka Kenya ku dhacday maanta xuduuda Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan gaar ahaana dhinaca Liboya ee Kenya.
Wararka ayaa sheegaya in diyaraadaa oo ahayd kuwa milatariga ay u siday sahay ciidamada Kenya oo maalnitii shalay gudaha usoo galay dhulka Soomaaliya, waxayna
wararku intaa ku darayaan inay Diyaaradu gebi ahaanba burburtay.
Dad Goobjoogayaal ah ayaa sheegay in diyaraadaasi ay ku soo dhacday goob iskuul ah oo
ay wax ku baranayeen arday, sidaa awgeed ay sababtay khasaare isugu jira
dhimasho iyo dhaawac.
Diyaaradan ayay xukuumadda Kenya ku tilmaantay inay u burburtay cilad ku timi awgeed, waxayna sheegeen in markii ay Garoonkii ay ka kacday ee qiyaas 2 km ah socotay ay burburtay, isla markaana ay ku dhinteen shan qof oo ka mid ah rakaabkii saarnaa oo ka tirsan Ciidanka Dalka Kenya.
Dhinaca kale Xarakada Al-Shabaab ayaa ka jawaabtay duulaanka dalka Kenya ciidamadiisu kusoo galeen gudaha Somalia oo ay ku tilmaameen mid ay dowladda Kenya kusoo qaaday dalka dadka Soomaaliyeed iyo dhulkooda.
Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali dheere oo shir jaraa’id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in xarakada mujaahidiinta ay cadawga shisheeye ka difaacayaan diinta iyo dalka. wuxuuna ku hanjabay in aanay jiri dooonin daaraha dhaadheer ee Kenya haddii aanay deg deg uga bixin ciidamada Kenya dalka Somalia.
Wuxuuna Sh. Cali Dheere umadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan cadawga hororka ah ee Kenya iyo Ethiopia oo sida uu sheegay kusoo duulay dalkooda, maadaama aanay ka jirin dawlad xaq u leh difaaca dalka iyo dadka shacabka ah, balse ay iyagu difaacayaan oo aanay ku negaanayn ciidamada Kenya dalka Somalia.
Maaha markii ugu horreysay ee Dowladdaha la deriska ah Somalia ay ciidankoodu galaan Soomaaliya, iyagoo tallaabadaa ku sababaynaya inay la dagaallamayaan koox Soomaaliyeed oo khatar ku ah ammaankooda, isla markaana ay oggolaasho ka haysato dowladda Soomaaliya.
Sannadkii 2006 ayay ahayd markii ciidamada dawladda Ethiopia ay galeen Soomaaliya, iyagoo waqtigaa ku sababeeyay inay iska celinayaan Maxkamadihii Shareecada Islaamka ee xiligaa ka dhashay gedoodkii shacbiga ee lagaga takhalusay hogaamiye kooxeedyadii mudada dheer ka talinayay xaafadaha Muqdisho, waxaana xiligaa Maxkamadda Islaamiga ah Madax u ahaa, Madaxweynaha hadda xilka haya Shiikh Shariif Shiikh Axmed.